global ime bank limited(global ime bank limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका–१६ मगंलबजारमा आज आइतबारदेखि नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ। नयाँ शाखाको सुरुआतसँगै बैंकको शाखा संख्या २८२ पुगेको छ। ग्लोबल आइएमई बैंकले मुलुकभर तथा मुलुकबाहिर बैंकिङ सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले ७६ जिल्लामा २८२ शाखा, २५१ एटीएम, २६० शाखा रहित बैंकिङ...
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकहरुलाई बचत खातामा उच्च ब्याजदर प्रदान गर्ने उद्देश्यले ‘ग्लोबल आइएमई हाइब्रिड बचत खाता’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले ल्याएको नयाँ हाइब्रिड बचत खातामा १ लाख रुपैयाँ बचत पुगेपछि उक्त बचत स्वतः मुद्दतिमा परिणत हुने सुविधा रहेको छ । यस बचत खाताको समयावधि ग्राहकहरुको इच्छा अनुसार १...
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र एनसेल एक्जियाटा लिमिटेड (एनसेल)बीच बैंकको ग्लोबल सहयात्री रेमिट्यान्स बचत खातावाल ग्राहकहरुलाई ब्यालेन्स र मोबाइल बैंकिङ्ग एप्लिकेसन ‘ग्लोबल स्मार्ट प्लस’ चलाउनका निम्ति डाटासहितको सहयात्री सिमकार्ड सित्तैमा उपलब्ध गराउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । उक्त समझदारीपत्रमा...
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले काठमाण्डौ जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपालिका –१७, खुसिबुमा २०७८ कार्तिक १ गते सोमबारदेखि नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । नयाँ शाखाको सुरुवातसँगै बैंकको शाखा संख्या २८१ पुगेको छ । यसैगरी बैंकले आजैबाट मोरङ जिल्ला सुनबर्षी नगरपालिका –२, अमरदहमा नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ...
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले ३ नयाँ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले इलामको पञ्चमी बजार, पाल्पाको सरदेवा र मोरङको नयाँबजारमा नयाँ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । यी ३ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा आएसँगै बैंकको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा संख्या २६० पुगेको छ । बैंकले इलाम जिल्लाको...
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले नेपालीहरुको महान चाड विजयादशमी २०७८ को अवसरमा क्यासब्याक योजना ल्याएकोे छ । यस क्यासब्याक योजनाअन्तर्गत ग्लोबल आइएमई बैंकका सम्पूर्ण मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ता ग्राहकहरुले बैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग एप्लिकेशनमार्फत दक्षिणा दिन असोज २९ गते विजया दशमीका दिन बिहान १० बजेदेखि दिनको १ बजेसम्म...
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंकले मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई आवश्यक पर्ने गैरकोषमा आधारित बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ। यस सम्बन्धमा दुवै बैंकबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताअनुसार मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकले आफ्नो व्यवसायलाई आवश्यकता पर्ने गैरकोषमा आधारित प्रतीतपत्र (लेटर अफ क्रेडिट), बैंक ग्यारेन्टी,...
ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस र नगद कति ?
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंकले लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको आज बिहान बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई चुक्तापुँजीको १३.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित लाभांशमा १० प्रतिशतले हुन आउने बोनस सेयर र ३.५ प्रतिशतले हुन...
मेगा र बीओकेलाई मर्ज गरी देशकै ठूलो बैंक बन्ने ग्लोबल आइएमईको तयारी
काठमाण्डौ । देशकै ठूलो बैंकको रुपमा रहिरहने उद्देश्यले ग्लोबल आइएमई बैंकले अन्य दुई वाणिज्य बैंकहरुलाई समेत मर्जर गर्नका लागि सहमतिको प्रयासलाई तीव्र पारेको छ । अहिले भइरहेका प्रयासहरु सार्थक बने भने नेपालको व्यवसायिक जगतका प्रतिष्ठित पात्र चन्द्र ढकालको सबैभन्दा ठूलो बैंकको अध्यक्ष हुने सपना पूरा हुनेछ । ढकालनिकट उच्च...
ग्लोबल आइएमई बैंकले गुल्मीका कृषकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र गुल्मी जिल्लाका स्थानीय तहहरुबीच हेफर नेपालको समन्वयमा बाख्रा पालन सामुदायिक विकास परियोजनाअन्तर्गत कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गरी वित्तीय मूल प्रवाहमा पहुँच बढाई कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ। सम्झौतामा बैंकको...
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको '८.५% ग्लोबल आइएमई बैंक डिबेन्चर २०८६/८७' ऋणपत्रको ३० लाख इकाइ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको छ। १० वर्ष अवधि रहेको यस ऋणपत्रमा बार्षिक ८.५० प्रतिशतका दरले प्रत्येक आर्थिक वर्षको ६/६ महिनामा ब्याज प्रदान गरिनेछ। यस ऋणपत्रलाई रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपाल लिमिटेडले (इक्रा–आईआर) एलए...
ग्लोबल आइएमई बैंकले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र नेपाल विकास अध्ययन संस्थानबीच लक्षित समुदाय तथा क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई सहुयितपुर्ण कर्जा साथै वित्तीय साक्षरता एवम् उद्यमशीलता तालिम उपलब्ध गराउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौताअनुसार नेपाल विकास अध्ययन संस्थानको सिफारिसमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरु, वैदेशिक रोजगारीमा...
नेप्सेमा ग्लोबल आइएमईको रु. ३ अर्बको ऋणपत्र सूचीकृत
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ग्लोबल आइएमई बैंकको ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र सूचीकृत भएको छ। बैंकको ‘ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड डिबेन्चर २०८६÷८७’ नामक ऋणपत्र सूचीकृत भएको हो। जसअनुसार १ हजार अंकित दरका कुल ३० लाख इकाइ नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ। यो १० वर्षे अवधिको ऋणपत्र हो। यसमा लगानीकर्ताले वार्षिक ८.५ प्रतिशत...
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहकार्यमा विश्वविद्यालय क्याम्पस, प्राणीशास्त्र (जुलोजी) विभाग परिसरमा वृक्षरोपण कार्यक्रम गरिएको छ। वृक्षरोपण कार्यक्रमको उद्घाटन त्रिभुवन विश्वविद्यालय जुलोजी विभाग प्रमुख प्राध्यापक तेजबहादुर थापा तथा ग्लोबल आइएमई बैंक, कीर्तिपुर शाखा प्रबन्धक शोभा...
काठमाण्डौ । नेपालस्थित रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले ग्लोबल आईएमई बैंकको रेटिङलाई स्तरवृद्धि गरेको छ। इक्रा नेपालले जारीकर्ता रेटिङलाई [ICRANP-IR] A- बाट [ICRANP-IR] A तथा हाल विद्यामान ऋणपत्रको रेटिङलाइ पनि [ICRANP] LA- बाट [ICRANP] LA- मा स्तरवृद्धि गरेको हो। यस रेटिङले बैंकको आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमा नै पूरा गर्न सक्ने पर्याप्त...